Zimbabwe’s mineral exports marginally dropped by 3% to US$799,6 million in the first four months of the year, largely weighed down by gold as well as nickel ores and concentrates, data gathered by Mining Zimbabwe Magazine shows. By Dumisani Nyoni. Data gathered from the Zimbabwe National Statistics Agency (ZimStat) show that during the first
Zimbabwe: Mining Sector Needs to Dig Deeper allAfrica
Zimbabwe has a rich and diverse minerals resource base that could be (and should be) an important contributor to sustainable growth and development. The sector has rebounded dramatically from the hyperinflation economic crisis Minerals Governance: The current “free-mining” (FIFA) colonial mineral regime is inappropriate for using mineral
Zimbabwe is a mineral rich country with up to 40 different minerals and 800 operating mines. Mining in Zimbabwe makes up 5% of the countries GDP as well as providing 4.5% of employment to the population. With 60% of the countries land surface made up of ancient rocks that host a rich variety of mineral resources, the mining sector provides a
It conducts research into products and processes to generate value added products from Zimbabwe’s Mineral resources. The department comprises of six sections namely Mineral dressing, Chemical Laboratory, Fire Assay, Mineralogy, Physical metallurgy, and Ceramic Sections apart from the Administration Section.